Soo -saareyaasha Mashiinka Maskaxda - Shiineeyska Shiinaha ee Bixiyeyaasha iyo Warshadda
Giraanta kalluumeysiga kalluunka weyn CC wareegga giraanta kalluumeysiga 8000 ugu fiican kalluumeysiga weyn
3. Saamiga Dhegaha: 4: 8: 1
Giraangiraha kalluumeysiga weyn SH 8000 10000 12000 giraangiraha kalluumeysiga giraangirta kalluumeysiga
Habka Kalluumeysiga: Duulista Kalluumeysiga Badda Kalluumeysiga & Doonyaha Kalluumeysiga Jiida Kalluumeysiga
3.Ball Saamaynta: 6+1
4.Qiirka Heerarka: 4.6: 1
Kalluumeysiga jillaabashada jaban ee kalluumeysiga wareegga wareegga AR kalluumeysiga ayaa ruxma biyaha cusbada
DW Kalluumeysiga duudduuban ee duudduuban ayaa loo adeegsaday garbaha kalluumeysiga iibinta giraangiraha kalluumeysiga
3.Qiirka Heerka: 6.7: 1
Jumlada 5.2: 1 AR Wareegtada garbaha garbaha kalluumeysiga ayaa gilgila birta cusbada leh ee birta kalluumeysiga
Habka Kalluumaysiga: Kalluumeysiga Kalluumeysiga Guud
3.Qiirka Heerarka: 5.2/1
FBE Kalluumeysigu wuxuu ruxaa garbaha kalluumeysiga biyaha cusbada leh ee giraangirta usha kalluumeysiga
3.Qiirka Heerarka: 4.7: 1/5.0: 1
JS Jumlada Dheer JS Kalluumaysiga Kalluumaysiga Bidix iyo Gacanta Midig Ku Beddel Ulaha Kalluumaysiga
Habka Kalluumeysiga: Kalluumeysiga Bass Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga
2.Features: Ultra Smooth-Boodhadh badan oo tayo sare leh ayaa siiya mid aad u siman., Awood leh - Sii awood joojin aan caadi ahayn. Waxay leedahay biraha adag ee birta adag, marsho wadista mesh kaamil ah. Waxaa fiican inaad doorato taxanaha 2000 iyo 3000 haddii aad ku jirto kalluumeysiga biyaha macaan. Haddii aad eryanayso kalluunka weyn ama noocyada biyaha cusbada leh, 4000 ama ka sare ayaa ah ikhtiyaar ka fiican
4.Qiirka Heerka: 5.2: 1
GX Metal Spinning Wheel Reel 8000-12000 Aluminiumka Abu Abu Kalluumeysiga Weyn
1. Habka Kalluumaysiga: Kalluumaysiga Guud2.
Nooca Reel: Spinning Reel - Waa doorbidida xulashada kalluumeysatada badan, ha ahaato bass kalluumeysiga harada ama bartilmaameedka tarpon ee xeebta. Habka aad u tuurto gariire -wareegga waa inaad iska rogtaa siligga dammaanadda biraha, kaas oo sii daaya xarigga kabka.
4.Qiirka Heerarka: 4.7: 1
Reel iibinta kulul ee birta birta ah ee xajinta xajmiga 5.5: 1 Saamiga Gear Saltwater Reel carp Reel
4.Qiirka Heerka: 5.1: 1/5.5: 1
Spinning Reel carp bir bir buuxda leh oo jiidaysa jiidista Saltwater Kalluumaysiga
4.Qiirka Heerarka: 4.1: 1
Kalluumeysiga kalluumeysiga FB8000-12000 biraha weyn ee kalluumeysiga garbaha 4.1: 1 xawaaraha sare